Izinto eziyinyani ngeHarsh ye-10-Day-Contract Life kwi-NBA - I-Nba
Izinto eziyinyani ngeHarsh ye-10-Day-Contract Life kwi-NBA
Kwakuyiveki yokuqala ka-Epreli xa umphathi kaRondae Hollis-Jefferson engena ngokukhawuleza endlwini yomdlali kwaye ehambisa iindaba ebezilindele ukuzifumana ngaphezulu kweenyanga ezine. U-Hollis-Jefferson wayengekho kuluhlu lwe-NBA olusebenzayo ukusukela ukuphela kwexesha le-2020, kodwa kwangoko ngala mini wayevile ukuba iPortland inomdla wokumsayina kwisivumelwano seentsuku ezili-10.
Engqondweni yam, bendifana nokuthi, 'Ndoda, ukuba abandibizi, ngekhe ndidlale unyaka wonke,' utshilo uHollis-Jefferson ngomnxeba kwiveki ephelileyo.
Inzala evela ePortland yayisemthethweni, kwaye emva kokufaka inkontileka kwisivumelwano sakhe, uHollis-Jefferson waphefumla; ekugqibeleni waba neqela lokudlala. Ngentsasa elandelayo, wavuka ngo-5 ekuseni ukuze akhwele inqwelomoya enqamlezayo ukuze abone ukuba angaziguqula iintsuku ezili-10 azenze enye into.
U-Hollis-Jefferson waqala isizini ka-2021 kwinkampu yoqeqesho kunye neTimberwolves, kodwa xa bakhetha ukumyeka uluhlu lwezizathu zokuguquguquka , eyokuqala hayi. 23 ubuyele ekhaya eDelaware enamathandabuzo ngendawo yakhe kwiligi. Yayiyinyani yokwenyani, utshilo uHollis-Jefferson. Kuba ukuba ubunokundixelela kwiminyaka emithathu eyadlulayo, kwiminyaka emine eyadlulayo, ‘Rondae, eli ibiza kuba likamva lakho,’ ngendandi hleke. Ke ukuze ubekho kweso sikhundla waye— ngu —Nzima ngokwenene.
Izikhundla zaMandla zeNBA: Ukubala okugqibela
Emva kokukhululwa, uHollis-Jefferson wagqiba ekubeni agxile kwizinto ebomini bakhe anokuzilawula: ukuhlala emile, ukungena ejimini, kunye nokuhlala usempilweni kwaye u-COVID-19-esazi kangangoko. Ukuba eMinnesota ngobusika kunye noKarl-Anthony Towns-owaswelekelwa ngunina kunye namanye amalungu osapho ngenxa yentsholongwane kulo nyaka uphelileyo-u-Hollis-Jefferson wazibonela ngawakhe amehlo ukuba ingaba i-COVID-19 ingoyikisa kangakanani. Kungenxa yoko wazama ukuba nononophelo olongezelelekileyo kunyana wakhe omncinci ekhaya, kwaye ethatha amanyathelo okhuseleko ngalo lonke ixesha xa kufuneka eyokuthenga ukutya okanye asebenze ukuze ahlale eyi-NBA elungile. Wayeyazi ukuba amaqela abeka ipremiyamu kubhetyebhetye kunye nokufumaneka.
Ndiziva ngathi ngeli xesha lonyaka, ukuba ubungenguye umntu oza kungena kwaye aphumelele umdlalo weqela, ngokuqinisekileyo banokukufaka endaweni yakho, utshilo uHollis-Jefferson. Lishishini, kodwa ngokuqinisekileyo linzima.
Izithintelo zeli xesha le-NBA zichaphazele iligi kwibhodi yonke. Kodwa kubadlali kwimiphetho abanamathuba ambalwa kunesiqhelo ukubonisa amandla abo-ngenxa yexesha elifutshane langaphandle, ukubekwa emngciphekweni kwearhente yasimahla, kunye nokusilela kwexesha elipheleleyo le-G League-inkqubo yokuhlala ulungele ithuba kwi-10 Idili-yosuku lube ngumceli mngeni omkhulu ngakumbi.
Ukunyaniseka, kuyabanjwa, umdlali wesibini, uTyler Cook, osayine iimvumelwano ezintathu zeentsuku ezili-10 ngeli xesha langoku kwaye ngoku unePistons, watsho ngomnxeba kwiveki ephelileyo. Bekuxakekile, kodwa kulo nyaka nesiqingatha uphambene kuwo wonke umntu.
Kule minyaka ili-15 idlulileyo , umndilili weekhontrakthi zeentsuku ezili-10 ezili-10 zisayiniwe kwi-NBA ngexesha ngalinye. Ngokwesiqhelo, phakathi kwe-20 kunye ne-40 yepesenti yabo batyikityiweyo baba ziidili eziya kuhlala ubuncinci ukuphela kwexesha. Kulo nyaka, nangona kunjalo, iikhontrakthi zeentsuku ezili-10 ezili-10 zikhutshiwe, kodwa malunga neepesenti ezili-9 kuphela eziguqukele kwizivumelwano zokuphela kwexesha. Ngamanye amagama, amaqela abonakala ekuxabisa ukuba bhetyebhetye kunakuqala kwaye ubukhulu becala ebengafuni ukuzibophelela kubadlali abasayinwe kule nkqubo. Oku akuphikisi kuphela ukhuseleko lwabadlali kwixesha elifutshane, kodwa kukwathetha ukuba abanalo ithuba lokudlala kwi-postseason kwaye babonise iitalente zabo kunyaka olandelayo.
Kusenokwenzeka ukuba ityhafile kancinci [ngeli xesha lonyaka] kuba akukho ligi ye-G, yatsho enye iarhente. Ibhola yeG League ihlale kuphela iiveki ezimbalwa, ke abafana bebehleli nje, kwaye ngequbuliso igama lomfana liyavela ukuba utyikityiwe kwaye uyafana, 'Yima, bebengadlali?'
Ibhola encinci ye-G League, ebandakanya nje imidlalo eli-15 yexesha eliqhelekileyo ngo-Matshi, yanika abadlali abaphambili ithuba elinye lokubonisa amandla abo. Kodwa yayilinganiselwe. Yonke imidlalo, yonke into ephetheyo ibithwele uxinzelelo kunye nobunzima. Kwaye abo babengekho kwenye yeerosta ezili-18 kwafuneka bazi indlela yabo yokufumana ii-radar ze-NBA franchise.
Umdlali ofana no-Cook, kwakungekho enye indlela ngaphandle kokufumana ithuba lakhe kwiqamza, kwaye kwahlawulwa. UCook wafumana umnxeba ovela kwiiNetets ngasekupheleni kukaFebruwari kwaye kungekudala waya eBrooklyn esuka ekhayeni lakhe eSt. Kungekudala emva kokufika, nangona kunjalo, uCook waqonda ukuba ngekhe kubekho ndawo yexesha elide kuye. Amanatha ayesele eza kutyikitya uBlake Griffin, owayeza kuthatha indawo enkulu, kwaye emva kweentsuku zakhe ezili-10, uCook wayesele ekhaya elinde omnye umnxeba.
Bendithatha iimvavanyo [ze-COVID-19] ekhaya ngelixa bendilinde ukuhlala kwiprotocol ngalo lonke ixesha, utshilo uCook. Ngale ndlela bendihlala ndikulungele kwaye ndiqinisekisa ukuba ndingaya ngqo kuyo xa sele kufikile umnxeba.
Xa iGrizzlies yayifuna ukutshintshwa kokonzakala kwasekuqaleni kukaJanuwari, babiza uTim Frazier oneminyaka engama-30 bamsayina kwisivumelwano seentsuku ezili-10. UFrazier wakhawuleza wasuka eHouston waya eMemphis, apho kwafuneka abeke yedwa iintsuku ezintandathu ngaphambi kokuba isivumelwano sakhe seentsuku ezili-10 siqale, ngokweenkqubo ze-NBA. Kodwa uFrazier wayekulungele ukwenza nantoni na eyithathayo. Emva kwexesha elifutshane le-arhente yasimahla ye-offseason efike yadlula ngaphandle kwesivumelwano, uFrazier wadana. Kodwa uthathe isigqibo sokuba abe nomonde kwaye azenzele inkqubo entsha ngelixa elinde umnxeba.
Wazimisa ePhoenix-kude nosapho ukunciphisa ukubonakaliswa kwe-COVID-19-apho aqhubeka khona nokuqeqesha, ukusebenza, kwaye elungile ngomzuzwana. Kwakuyixesha elinzima kubomi bukaFrazier: ukwahlukaniswa kwaba ngumceli mngeni ngokwasengqondweni, kwaye ubusuku abachitha bejongile imidlalo ye-NBA awayenqwenela ukuba wayedlala kuyo ayincedanga kakhulu. Kodwa uqhubeke nokugxila kwinjongo yakhe.
Ndingaba ndiyaxoka ukuba ndingakuxelela ukuba ndonwabile ngalo lonke ixesha, utshilo uFrazier. Kwafuneka ndifumane iindlela zokwenza izinto ezahlukeneyo, ukuze ndilunge ngengqondo. … Ndithathe uhambo olunyukayo, nto leyo eyayintsha kum, kodwa yacoca ingqondo yam yanceda.
Njengoko uFrazier ebeka, iintsuku ezimbi ziyinxalenye yenkqubo yokulinda, ngakumbi xa usebenza kwinto engaqinisekiswanga. Utshintsho lwesantya okanye incoko yokusondeza kunye nelungu losapho kuncede ukunciphisa loo miqobo yemihla ngemihla eya kwisivumelwano. Kodwa ungafezekisa kangakanani na emva kokuba ugqibile fumana isivumelwano seentsuku ezili-10?
Amaqela anika abadlali beekhontrakthi zeentsuku ezili-10 njengoFrazier noHollis-Jefferson kuphela imizuzu embalwa ngobusuku, ukuba ikhona, oko kuthetha ukuba uxinzelelo lukhona xa bengena emdlalweni. Kananjalo banayo iveki enesiqingatha yokuziqhelanisa namaqela esigama asetyenziswayo kwiiseti kunye nokudlala iminxeba. Kuya kufuneka babe zizikhuthazi zebhentshi kunye nabadlali abazimiseleyo abagcina indlela yokuziphatha egqithileyo kunye namandla.
Ekuqaleni kuyothusa, utshilo uHollis-Jefferson. Uhamba kweso sigaba sokukhawuleza kunye novalo. Kodwa emva koko uyaqonda ukuba ziintsuku ezili-10. Uneentsuku ezili-10 zokubonisa umsebenzi wakho, uwenze ubonakale ngathi ungowakhe.
Imida yempazamo sele inciphile, kodwa njengoko uCook (eBrooklyn) noFrazier (ngexesha lokuqala kwakhe eMemphis) befumanise, nokuba akunamathelanga na ngaphambili ukuba isivumelwano sokuqala ngamanye amaxesha singekho kulawulo lwakho ngokupheleleyo.
Abadlali abambalwa unayo ndikwazile ukwenza okungcono kwisivumelwano seentsuku ezili-10 ngeli xesha lonyaka, nangona. Thatha uNorvel Pelle, otyikitye iintsuku ezili-10 kunye neSacramento neNew York ngeli xesha lonyaka, kwaye kwiveki ephelileyo wayenza inkontileka kunye neKnicks yokuncamathisela ukuphela kwexesha. IiNeths, kwicala labo, batyikitye ngaphezulu kwabadlali abambalwa kwizivumelwano zeentsuku ezili-10 njengoko bejongile ngokungabikho, kwaye ngale nkqubo bafumene abanye abadlali abakulungeleyo ukungunda kwabo. IiNeths zinike u-Alize Johnson ikhontrakthi yokuphela kwexesha kunye nokugcina amanqaku uMike James ovela kwi-CSKA Moscow. Iklabhu yaseRussia ivumele uJames ukuba aphume kwisivumelwano sakhe nabo, nto leyo ebonisa ukuba iiNeths kungenzeka zigcine uJames kwisivumelwano seentsuku ezili-10 kwaye mhlawumbi nakwelinye ixesha lonyaka. Umdlali ngamnye okwikhontrakthi yexesha elifutshane ngolu hlobo, ngumdlalo wokugqibela abazama ngamandla ukufikelela kuwo.
yifilimu exabisekileyo ilungile
Cishe uCook wayengakholelwa ukuba kwenzeka ngamabona-ndenzile. Wayedlala kwisivumelwano sakhe sesibini seentsuku ezili-10 neePistons xa babetyelele iDenver, iqela elalinike uCook isivumelwano sakhe sokuqala seNBA. Ngexesha lohambo lwendlela, amagosa ePistons abizela uCook kwigumbi kwaye amnika iindaba: Babemtyikitya ukuphela kwexesha. Isivumelwano asiqinisekiswanga emva kweli xesha lonyaka, kodwa siqinisekisa ukuba uCook uya kuba nakho ukuchitha inkampu yoqeqesho kunye nePistons kwaye aqhubeke nokwakha igama elihle azenzele lona.
Khange ndibenalo naluphi na uhlobo lokuqiniseka njengoko inxulumene nekamva lam kude kube ngoku, utshilo uCook, ke kulungile ukuva ukuba uyafunwa kwaye batyale kuwe.
Abafana abafana no-Cook kunye nomdlali weentsuku ezili-10 u-Oshae Brissett bawela kudidi olwahluke kancinci kune-Hollis-Jefferson, Frazier, kunye no-DeMarcus Cousins ​​(abathi i-Clippers isayinwe kwisivumelwano kude kube sekupheleni kwexesha emva kweekhontrakthi ezimbini zeentsuku ezili-10) banikwe abo babengabadlali abangazange bangene kwi-NBA ngokusebenzisa iG League kunye neentsuku ezili-10.
Yonke imihla yayiluvavanyo, utshilo u-Brissett kwinkomfa yoonondaba kwiveki ephelileyo. Ukusuka xa ndehlayo kwinqwelomoya, ndaziva ngathi amehlo andijongile.
Akuzange kuthathe xesha lide ukuba uBrissett akhanye ngeli xesha lonyaka kwaye afumane isivumelwano sesibini seentsuku ezili-10 kunye neePacers. Emva koko kwafika i-jackpot: isivumelwano seminyaka emithathu esixabisa i-3.8 yezigidi zeedola. Umvuzo awuqinisekiswanga emva kweli xesha lonyaka, kodwa kubonisa ukuba i-Indiana ifuna ukutyala imali eBrissett kakhulu njengoDetroit ufuna ukutyala imali kwiCook.
UFrazier ungene kwisithuba sakhe sesibini seentsuku ezilishumi kunye neGrizzlies ekholelwa ukuba indawo evulekileyo yoluhlu yayithetha ukuba wayenethuba lokuncamathisela. Wayesele eqhelene nenkqubo, imidlalo, kunye nabasebenzi, kwaye wayesazi ukuba unethuba. NgoMgqibelo, iGrizzlies ibonakalise ukuba wenze okuninzi ngokusayina kuye lonke ixesha lonyaka.
Kwakungekho lula, utshilo uFrazier kwiiyure nje ezimbalwa emva kokufika kwesivumelwano. Kodwa ngamadini owenzayo, ngakumbi ngeli xesha lonyaka. Wenza loo madini ngeenjongo zokugqibela engqondweni.
UFrazier uthi nangona eqinisekisiwe ukuba kwiiGrizzlies ixesha eliseleyo, akazimiselanga ukuphuma kule hotele ebehleli kuyo okoko wafika eMemphis. Ukuhlala phantsi ngumnqweno kubantu abaninzi abadala abahamba njengaye. Ngokunjalo noHollis-Jefferson, othenga isivumelwano seentsuku ezili-10 esiphela kule veki kungekho siqinisekiso sokuba siyakuguqulwa sibe sisivumelwano sokuphela kwexesha.
Andonelisekanga, utshilo uHollis-Jefferson. Ndicinga ngathi ‘awukenziwa umsebenzi.’ Ndisezintsuku ezili-10, uyazi?
Iingoma zomntwana olusizi cudi
I-2019 nba uyilo lwamabanga
hlukana kakuhle neengoma
Umboniso bhanyabhanya malunga nendawo 2016
nfl ndilahlekile inqaku elongezelelweyo
bhanyabhanya oqaqambileyo osekwe kwi